Disc Granulation Production Line - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Ny fizotran'ny famokarana granulation feno sy isan-karazany dia iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny Henan Zheng Heavy Industries. Izy io dia afaka manome vahaolana feno sy azo antoka famokarana mifanaraka amin'ny tena ilain'ny mpanjifa.
Manana traikefa amin'ny fandrindrana sy ny serivisy amin'ny tsipika famokarana zezika isan-karazany izahay. Tsy ny rohy fizotry ny fizotran'ny famokarana ihany no ifantohanay, fa koa ny mahatakatra ny antsipirian'ny fizotrany tsirairay amin'ny tsipika famokarana iray manontolo ary hahatratra ny fifandraisan-davitra.
Ny tsipika famokarana granulator disk dia matetika ampiasaina hamokarana zezika organika. Ny zezika biolojika dia azo vita amin'ny biby fiompy sy ny akoho amam-borona, ny fako amin'ny fambolena ary ny fako madinidinika. Ireo fako biolojika ireo dia mila karakaraina bebe kokoa alohan'ny hamadihana azy ireo ho zezika biolojika ara-barotra lafo amidy. Ny fampiasam-bola amin'ny famadihana ny fako ho harena dia tena mendrika tokoa.
Ny tsipika famokarana zezika voajanahary voajanahary dia mety amin'ny:
►Famokarana zezika taim-biby
►Famokarana zezika zezika kisoa
►Famokarana zezika akoho sy zezika gana zezika
►Famokarana zezika organika zezika
►Famokarana zezika biolojika ny fotaka an-tanàn-dehibe
1. zezika biby: zezika akoho, zezika kisoa, zezika ondry, zezika omby, zezika soavaly, zezika bitro, sns.
2. fako indostrialy: voaloboka, vinaingitra vinaingitra, reside mangahazo, residu siramamy, fako biogas, sisa tavela amin'ny volony, sns.
5. fotaka: fotaka an-tanàn-dehibe, fotaka amin'ny renirano, fotaka fanivanana sns.
Ny tsipika famokarana granulation dia mandroso, mahomby ary azo ampiharina, matevina ny firafitry ny fitaovana, avo ny automatique, ary tsotra ny fandidiana, izay mety amin'ny famokarana betsaka ny zezika biolojika.
1. Fitaovana manohitra ny harafesina sy maharitra azo ampiasaina amin'ny fitaovana famokarana rehetra. Tsy misy fandefasana fako telo, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana. Mihazakazaka hatrany izy io ary mora tazonina.
2. Ny fahaizan'ny famokarana dia azo ahitsy arak'izay takian'ny mpanjifa. Ny firafitry ny tsipika famokarana iray manontolo dia feno, siantifika ary mitombina, ary mandroso ny teknolojia.
Ny fitaovana famokarana granulation disk dia misy trano fitehirizana entana → blender (sirring) → masinina fametahana kapila (granulator) → milina sieve roller (manavaka ny vokatra tsy manara-penitra amin'ny vokatra vita) → crusher rojo mitsivalana (vaky) → milina fonosana mandeha ho azy (fonosana) → conveyor fehikibo ( mifandray amin'ny fizotrany samihafa).
Naoty: io tsipika famokarana io dia ho an'ny referansa ihany.
Ny fizotran'ny fizotry ny famokarana granulation dia matetika azo zaraina ho:
1. Dingana fizarana akora
Ny tahan'ny akora hentitra dia afaka miantoka ny fahombiazan'ny zezika avo. Ny akora fototra dia misy ny dikin-biby, voankazo lo, peel, legioma manta, zezika maitso, zezika an-dranomasina, zezika fambolena, fako telo, zavamiaina bitika ary akora simika biolojika hafa.
2. Dingana fampifangaroana akora
Ny akora rehetra dia afangaro sy afangaro tsara ao anaty blender.
3. Dingana tapaka
Ny crusher rojo mitsangana dia manapotipotika zavatra lehibe ho farantsa kely izay afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny granulation. Avy eo ny mpandefa fehikibo dia mandefa ilay fitaovana ao anaty masinin-tsolika kapila.
4. Fomba fizotram-panafody
Ny zoro kapila an'ny masinin-tsolika kapila dia mandray rafitra arofenitra, ary ny tahan'ny famoronana baolina dia mety hahatratra 93% mahery. Taorian'ny nidiran'ny fitaovana tao anaty lovia granulation, tamin'ny alàlan'ny fihodinana tsy tapaka ny kapila granulation sy ny fitaovana famafazana, dia mifamatotra miaraka ilay akora mba hamokarana sombina miaraka amina endrika sy endrika tsara tarehy.
5. Dingana fizahana
Ny fitaovana nangatsiaka dia entina any amin'ny milina sivana sivana ho an'ny fitiliana. Ireo vokatra mahafeno fepetra dia afaka miditra ao amin'ny trano fitehirizana vita amin'ny alàlan'ny mpampita fehikibo, ary azo afangaro mivantana koa. Ireo sombin-javatra tsy mitombina dia hiverina hiverina amin'ny laoniny.
6. Drafitra fonosana
Ny fonosana no dingana farany amin'ny tsipika famokarana zezika organika. Ny vokatra vita dia fonosina amin'ny milina famonosana automatique tanteraka. Ny diplaoma avo lenta sy ny fahombiazan'ny avo lenta dia tsy vitan'ny hoe manatratra fandanjana marina, fa koa mamita tsara ny fizotrany farany. Ny mpampiasa dia afaka mifehy ny hafainganam-pandehan'ny sakafo ary mametraka ny masontsivana hafainganam-pandeha mifanaraka amin'ny tena takiana.